Ujyaalo Sandesh | » ओलीबाट कसरी मारिएका थिए धर्म ढकाल ? ओलीबाट कसरी मारिएका थिए धर्म ढकाल ? – Ujyaalo Sandesh
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसीर ५ गतेसम्म भएको जनयुद्धलाई आंतककारी गतिविधिका रुपमा चित्रित गर्दै आएका छन्। उनले आफ्ना लिखित दस्तावेज र मौखिक भाषणहरुमा प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका मान्छेहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, जनयुद्धका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार नागरिक मारिएको नैतिक जिम्मा प्रचण्डले लिनुपर्ने भन्दै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा पुर्‍याउने चेतावनी पनि दिँदै आएका छन्।
कसरी मारिए धर्म ढकाल ?
वि.सं. २०२८ सालमा त्यतिबेलाको मेची–कोशी प्रान्तीय कमिटीले झापा व्रिदोहको नेतृत्व गर्‍यो। त्यसको मूल उद्धेश्य सामन्तवादका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्नु थियो। सामन्तवादका विरुद्धको संघर्षमा तत्काल कम्युनिस्टहरुले सामन्त र जमिन्दारहरुमाथि भौतिक र राजनीतिक कार्वाही गरेका थिए। तर, त्यसमध्येका एक नेता केपी शर्मा ओलीको उदण्ड स्वाभावका कारण विद्रोह व्यक्तिहत्यामा केन्द्रित भएको भन्नेहरु प्रशस्तै छन्।
२०२९ सालमा झापाका धर्मप्रसाद ढकाललाई सुतिरहेको अवस्थामा हत्या गरिएको थियो, त्यसको प्रमुख योजनाकार थिए केपी शर्मा ओली। जतिबेला उनी २२ वर्षका युवा थिए। निदाएका ढकाललाई ओली नेतृत्वको टीमले खुकुरीले छप्काएर हत्या गरेको थियो। झापा विद्रोहका क्रममा ओलीले सामन्तवादका विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष गर्ने, प्रचारात्मक कार्य गर्ने, जनतालाई संगठित गर्ने काम गरेनन्, अरु अनुमानका भरमा निहत्था नागरिकहरुको हत्यालाई प्रश्रय दिए, जसमध्ये एक गरिब किसान धर्मप्रसाद ढकाल पनि एक थिए।
प्रधानमन्त्री ओली झापामा मारिएका धर्मप्रसाद ढकाल र ज्ञानी ढकालका हत्याराका रोहवर साक्षी बसेका व्यक्ति हुन्। ज्यान मुद्धा लाग्ने डरले उनी मोहनचन्द्र अधिकारीसँग भागेर भारतका विभिन्न शहर धुम्न र काम खोज्न गए। काम खोजें, भनेजस्तो काम पाएनन, फर्केर पश्चिम नेपालको बारा जिल्लाको कुनै गाउँमा मोहनचन्द्र अधिकारीसँगै आए। एउटा इलाकामा राजनीति प्रचार गर्ने उद्देश्य राखेर बसे। प्रशाासनले थाहा पायो। त्यस बेलाको पत्रिका राष्ट्र पुकारले मोहनचन्द्र अधिकारीलाई खोजेका तथ्यलाई व्यापक रुपमा प्रचार गर्दै थियो। फोटोसमेत छापिएको थियो। संयोगवश एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने क्रममा मोहनचन्द्र अधिकारी समातिए, उनैका साथी खड्ग ओली पनि गिरफ्तारीमा परे। त्यसपछि उनले ज्यान मुद्दामा १४ वर्ष जेलमा बिताए।
झापा विद्रोह व्यक्तिहत्यामा केन्द्रीत हुँदै गएपछि पञ्चायती सरकारले चरम दमन गर्‍यो। कदमका कारण वामपन्थी शक्तिहरुमा ठूलो निरासा र भागाभागको स्थिति देखापर्‍यो। त्यसपछि बचेखुचेका झापालीहरुले २०२९ फागुन १६ देखि १९ भेला भई झापा जिल्ला कमिटीलाई बौराए, जसमा सिपी मैनाली, गोविन्द न्यौपाने, तारासाम योङ्गा, सीता खड्का, चन्द्र उप्रेती आदि थिए। यस कमिटिले पनि एक ‘‘असफल’’ २०३० असार २३ मा र एक ‘‘सफल’’ २०३० कार्तिकमा वर्गशत्रु खतम गर्‍यो। त्यसपछि भने झापामा कुनै ‘‘खतम’’ प्रयास भएनन्।
वि.सं. २०३० मंसिर ११ गते मोहनचन्द्र अधिकारी र केपी ओली जेलको पनि महाजेल गोलघरमा हालिएका थिए। गोलघर काठमाडौं केन्द्रीय कारागारको बीचमा छ। प्रचलनअनुसार जेलभित्र कसैले ज्यान मारेमा उसलाई गोलघरमा थुनेर सजाय दिइन्छ र गोलघरमा बसेर कसैको ज्यान मारे उसलाई पिँजराबासको सजाय दिइन्छ। जेलमा कुनै बन्दी पागल भयो भने उसलाई पनि अरू बन्दीहरूको सुरक्षार्थ गोलघरमा थुनिन्छ।
(१८ माघ २०७७, काठमाडौं। लाेकपाटी न्यूज